Vol। 12 डिसेम्बर, 1910। नम्बर 3
मानवीय मनको साथ त्यहाँ स्वाभाविक र बिना प्रयासको भविष्यको ठाउँ वा खुशीको राज्यको सोच्दछ। सोचाइ बिभिन्न तरिकाले व्यक्त गरिएको छ। अंग्रेजीमा यसलाई स्वर्ग शब्दको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अमेरिकाका प्रागैतिहासिक बासिन्दाहरूको टीला र चिहानमा भेटिएका अवशेषहरूले स्वर्गको सोचाइको प्रमाण दिन्छ। अमेरिकाको प्राचीन सभ्यताहरूको भग्नावशेषमा धातु र ढु stone्गामा स्मारक, मन्दिर र शिलालेखहरूले ती सभ्यताहरूको निर्माणकर्ताहरूको स्वर्गमा भएको विश्वासको पुष्टि दिन्छ। नीलको भूमिका मालिकहरूले ओबेलिस्क, पिरामिड र चिहानहरू पाले र मौन, मूर्तिपूजक साक्षीहरूको रूपमा छोडिदिए जसले भविष्यको आनन्दको अवस्था घोषणा गर्दछन्। एशियाका दौडहरूले गुफाहरू र तीर्थ स्थानहरूमा धेरै प्रमाणहरू प्रदान गर्दछन् र एउटा साहित्य जुन भविष्यमा मानव जीवनको सुखी अवस्थाको वर्णनले पृथ्वीमा उसको असल कर्मको परिणाम हो। युरोपको माटोमा इसाई विश्वासका स्वर्गतिर औंल्याउने प्वाँखहरू हुनुभन्दा अघि ढु stone्गाको घेरा, खम्बाहरू र क्रिप्टहरू पृथ्वीमा छँदा आफूमाथि स्वर्गका आशिष्‌हरू पाउन र पछि स्वर्गको सुख्खा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न फिट गर्न प्रयोग गर्थे। मृत्यु एक आदिम वा सीमित तरीकाले, वा संस्कृतिको सहजता वा असाधारण संग, प्रत्येक जातिले भविष्यको स्वर्गको राज्यमा आफ्नो विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रत्येक दौडको मिथक र पौराणिक कथा हुन्छ जुन आफ्नो ठाउँ वा निर्दोषताको अवस्थाको आफ्नै तरीकाले बताउँछ, जसमा दौड खुशीसँग बस्दछ। यस मूल अवस्थामा उनीहरूलाई उच्च व्यक्तिले अस्तित्व दिएका थिए जसमाथि उनीहरू भय वा श्रद्धा वा श्रद्धाका साथ हेरिरहेका थिए र जसलाई उनीहरू आफ्ना गुरु, न्यायाधीश वा बुबाको रूपमा विश्वास गर्छन् बच्चाहरूको विश्वासको साथ। यी विवरणहरूले भन्छ कि नियमहरू सृष्टिकर्ता वा उच्चतम व्यक्तिद्वारा प्रदान गरिएको थियो, जसले गर्दा यी अनुसार जिउनेहरू, दौड उनीहरूको साधारण सुखको राज्यमा बस्न जारी रहन सक्छ, तर ती नराम्रा परिणामहरू निर्धारित जीवनबाट कुनै पनि प्रस्थानमा सहभागी हुनेछन्। प्रत्येक कथाले जाति वा मानवअधिकारको अनाज्ञाकारिताको आफ्नै तरिकामा बताउँछ, र त्यसपछि समस्याहरू, दुर्भाग्यहरू, र विपत्तिहरूको, उनीहरूको पीडा र शोकका साथ पुर्खाहरूको अज्ञानता र अनाज्ञाकारिताको परिणाम दिन्छ।
पौराणिक कथा र पौराणिक कथा र शास्त्रले भन्छ कि मानव जाति पाप र पीडामा बाँचिरहनुपर्दछ, रोगले ग्रस्त हुनुपर्दछ र बुढो उमेरले पीडित हुनुपर्दछ जुन मृत्युमा समाप्त हुन्छ, किनकि पुर्खाहरूको त्यो पुरानो पापको कारण। तर प्रत्येक रेकर्ड आफ्नै तरिकाले, र चरित्रमा यो व्यक्ति द्वारा बनाईएको थियो, एक समयको भविष्यवाणी जब सृष्टिकर्ताको पक्षमा वा गल्ती गरेको पाप द्वारा व्यक्तिको, पृथ्वीको जीवनको यथार्थवादी सपनाबाट जोगिनेछ र भित्र छिर्नेछ। एक ठाउँ जहाँबाट पीडा र कष्ट, रोग र मृत्यु अनुपस्थित छ, र जहाँ प्रवेश गर्ने सबै निर्बाध र बेरोजगार खुशीमा बस्नेछन्। यो स्वर्गको प्रतिज्ञा हो।
पौराणिक कथा र कथाले बताउँछ र धर्मशास्त्रले मान्छे कसरी बाँच्नुपर्दछ र स्वर्गको विचित्रता प्राप्त गर्न भन्दा पहिले उसले के गर्ने भनेर निर्देशन दिन्छ। आफ्नो जीवनको चरित्र र जीवनको लागि उपयुक्त छ, मानिसलाई बताइएको छ कि उसले ईश्वरीय अनुमोदनद्वारा स्वर्ग प्राप्त गर्नेछ वा युद्धमा शौर्यका कामहरू गरेर, शत्रुलाई जितेर, अपराधीहरूलाई वशमा गरेर, उपवास, एकान्तता, विश्वासको जीवन द्वारा प्रार्थना वा तपस्या, दानका कार्यहरूद्वारा, अरूको कष्टहरूबाट राहत पाएर, आत्म-त्याग गरेर र सेवा जीवन बिताएर, अनुचित भोक, प्रवृत्ति र झुकावलाई बुझ्ने र नियन्त्रण गर्ने, सही सोच द्वारा, सही कार्यद्वारा र द्वारा ज्ञान, र स्वर्ग कि या त पृथ्वी भन्दा पर छ वा माथि छ वा केहि भविष्यमा पृथ्वीमा हुन छ।
मानिसको प्रारम्भिक र भविष्यको बारेमा इसाई मान्यताहरू अन्य पुरानो विश्वास भन्दा थोरै फरक छन्। इसाई शिक्षा अनुसार मानिस जन्मिएको छ र पापमा जिउँछ, र यो भनिन्छ कि पापको दण्ड मृत्यु हो, तर ऊ परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेर मृत्यु र पापको अन्य दण्डबाट बच्न सक्छ।
स्वर्गको बारेमा नयाँ नियममा भनिएका भनाइहरू सत्य र सुन्दर छन्। ईश्वरशास्त्रीय स्वर्गको बारेमा ईश्वरशास्त्रीय कथनहरू तर्कहीनता, विरोधाभास र छोटो दृष्टिको बेतुकापनको एक समूह हो। तिनीहरूले दिमागलाई बिगार्दछन् र इन्द्रियलाई सक्रिय पार्दछन्। ईश्वरशास्त्रीय स्वर्ग एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन शानदार बत्तीहरूले भरिएको छ, र असाधारण रूपमा सुसज्जित र धेरै महँगो पार्थिव चीजहरूले सजाइएको छ; यस्तो ठाउँ जहाँ प्रशंसाका गीतहरू सँधै स music्गीतको तनावमा गाइन्छन्; जहाँ सडकहरू दुध र महको साथ बग्दछन् र जहाँ अमृत खाना प्रशस्त हुन्छ; जहाँ हावा मीठो अत्तर र बल्मी धूपको सुगन्धले भरिएको हुन्छ; जहाँ आनन्द र रमाइलोले हरेक स्पर्शलाई प्रतिक्रिया गर्दछन् र जहाँ कैदीहरू वा मानिसका मनले गाउँछन् र नाच गर्छन् र थ्रिलिन्छन् र प्रार्थना र प्रशंसाको हसननास, अनन्त अनन्तसम्म।
यस्तो स्वर्ग कसले चाहन्छ? यदि सोचविचार गरीरहेको मान्छेले त्यत्तिकै उथले, कामुक, स्वर्गलाई आफूमाथि प्रहार गर्यो भने? मानिसको आत्मा एक मूर्ख, एक जेली माछा वा एक ममी जस्तै हुनु पर्छ, यस्तो कुनै पनि बकवास संग राख्न। आजकाल कोही पनि ईश्वरशास्त्रीय स्वर्ग चाहँदैनन् र यो प्रचार गर्ने ईश्वरविद् भन्दा कम कुनै पनि छैन। ऊ यहाँको श्रापित पृथ्वीमा बस्न चाहान्छ उसले त्यो महिमित स्वर्गमा जानुको सट्टा जुन उसले बनाएको हो र बनाएको हो र टाढा आकाशमा सुसज्जित छ।
स्वर्ग भनेको के हो? यो छैन वा यो अवस्थित छ? यदि यो गर्दैन भने, त्यसोभए किन त्यस्तो बेग्लाबेग्लै काल्पनिकहरूको साथ कसैको आत्म भ्रममा समय बर्बाद गर्ने? यदि यो अवस्थित छ र लायक छ, तब यो उत्तम हो कि यसलाई बुझ्नु पर्छ र यसको लागि काम गर्नुपर्छ।
दिमाग खुशीको तृष्णा गर्दछ र स्थान वा राज्यको आशा गर्दछ जहाँ खुशी महसुस हुनेछ। यो स्थान वा राज्य स्वर्ग भन्ने शब्दमा व्यक्त गरिएको छ। मानव जातिका सबै जातहरूले सबै प्रकारका स्वर्गका बारे सोचे र विश्वास गरे भन्ने तथ्य तथ्य यो हो कि सबैले सोच्दै जान्छन् र स्वर्गको प्रतिक्षा गरिरहन्छन् भन्ने तथ्यको प्रमाण यो छ कि दिमागमा यस्तो कुरा छ जुन सोचलाई बाध्य पार्छ, र यो केहि यो समान प्रकारको हुनुपर्दछ जुन यसको प्रति इम्पेल हुन्छ, र त्यो विचारलाई उत्प्रेरित गर्न र मार्गनिर्देशन गर्न जारी राख्नेछ जब सम्म त्यो आदर्श लक्ष्य हासिल नभएसम्म र यो हासिल हुँदैन।
विचारमा ठूलो उर्जा छ। सोचविचार गरेर र मृत्यु पछि स्वर्गको प्रतिक्षा गरेर, एक व्यक्तिले एक शक्ति भण्डार गर्दछ र आदर्श अनुसार निर्माण गर्दछ। यो शक्ति यसको अभिव्यक्ति हुनु पर्छ। सामान्य पृथ्वी जीवन यस्तो अभिव्यक्ति को लागी कुनै अवसर प्रदान गर्दैन। त्यस्ता आदर्श र आकांक्षाहरूले स्वर्गको संसारमा मृत्यु पछि आफ्नो अभिव्यक्ति फेला पार्दछ।
दिमाग एक खुशीको संसारबाट एक विदेशी हो, मानसिक संसार, जहाँ दु: ख, कलह र रोग अज्ञात छन्। संवेदनशील भौतिक संसारको किनारमा आइपुग्दा, आगन्तुक व्याकुल, छली, मोह र भ्रमहरू र रूपहरू र रंगहरू र संवेदनाहरूको छलबाट छक्क पर्छन्। आफ्नो सुखी अवस्था बिर्सिनुभयो र संवेदनाको वस्तुहरूमा इन्द्रियहरू मार्फत खुशी खोज्दै, उनले संघर्ष गरे र संघर्ष गरे र दु: खित वस्तुहरूमा पुग्न खोज्दा, त्यो खुशी त्यहाँ हुँदैन। बार्टर र बार्गेनको विद्रोह पछि, झगडा, सफलता र निराशाको पछि, पीडाबाट स्मार्ट र सतही सुखहरूले छुटकारा पाए पछि, आगन्तुक शारीरिक संसारबाट प्रस्थान गर्छ र आफ्नो खुशीको जन्मजात राज्यमा फर्कन्छ, आफूसँग अनुभव लिएर।
दिमाग फेरि आउँछ र बस्छ र भौतिक संसारबाट यसको आफ्नै मानसिक संसारमा जान्छ। दिमाग एक समय-चिन्तित यात्री बन्छ जो प्राय: भ्रमण गर्दछ, तर कहिल्यै गहिराइलाई साघुँरो गरेको छैन र सांसारिक जीवनको समस्याहरू समाधान गरेको छैन। मानिससँग थोरै नाफाको साथ धेरै अनुभव भएको छ। उहाँ आफ्नो अनन्त घरबाट संसारमा एक दिन बिताउन आउनुभयो, त्यसपछि फेरि विश्राम गर्न जानुभयो, मात्र फेरि आउनका लागि। यो तबसम्म चलिरहन्छ जब सम्म उसले आफैंलाई थाहा पाउँदैन, उसको उद्धारक, जसले उसलाई जित्ने जset्गली जनावरहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नेछ, जसले उसलाई भ्रम गर्ने भ्रमलाई भत्काउनेछ, जसले उसलाई संसारको उजाडस्थान र यस संसारमा संवेदनशील रमाहटहरूमार्फत डो guide्याउनेछ। जहाँ ऊ आत्म-जानकार हो, इन्द्रियबाट बेवास्ता गर्दछ र महत्वाकांक्षा वा प्रलोभनहरूबाट प्रभावित हुँदैन र कार्यको नतिजामा नजान्दछ। जब सम्म उसले आफ्नो उद्धारकलाई भेट्दैन र आफ्नो सुरक्षाको क्षेत्रलाई थाहा हुँदैन उसले स्वर्गको प्रतीक्षा गर्न सक्छ, तर उसले यो थाहा पाउँदैन वा स्वर्गमा पस्दैन जबसम्म ऊ अन्जानमा भौतिक संसारमा आउनुपर्दछ।
दिमागले पृथ्वीमा स्वर्गको अत्यावश्यक चीजहरू फेला पार्दैन, र यो यसको वरिपरिको, यसको भावनाहरू, इन्द्रियहरू र सेवा गर्ने संवेदनाहरूसँग पूर्ण सहमतिमा कहिले पनि हुँदैन। जबसम्म दिमाग ज्ञानी र यी सबैको स्वामी हुनेछैन, तबसम्म यो पृथ्वीमा स्वर्ग जान्न सक्दैन। त्यसकारण दिमागलाई भौतिक संसारबाट मृत्युबाट स्वतन्त्र गर्नुपर्दछ, यसको इनामको रूपमा खुशीको स्थितिमा प्रवेश गर्न, अगाडि देखिएको आदर्शहरुमा बाँच्न, र यसको दु: खबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, र भाग्नुपर्दछ। यो संघर्ष भएको प्रलोभनहरूको साथ, र यसले गरेका असल कार्यहरूको आनन्द लिन र यो उत्प्रेरित भएको आदर्श मिलन।
मृत्यु पछि सबै मानिस स्वर्गमा प्रवेश गर्दैनन्। ती व्यक्तिहरू जसको सोचाइ र काम शारीरिक जीवनका चीजहरूमा खर्च गरिएको छ, जसले आफ्नो मृत्यु पछि भविष्यको अवस्थाको बारेमा आफैलाई चिन्ता वा चिन्ता गर्दैनन्, जसको शारीरिक रमाईलो वा कामबाट अलग कुनै आदर्श छैन, जससँग परे वा ईश्वरीय प्रति कुनै सोचाइ वा आकांक्षा छैन। तिनीहरू भित्र, ती मान्छेहरू मरे पछि स्वर्ग हुनेछैनन्। यस वर्गका केही दिमागहरू, तर मानिसजातिका शत्रु नहुने, मध्यवर्ती अवस्थामा रहन्छ गहिरो निद्रामा, जबसम्म नयाँ शरीर तयार हुँदैनन् र उनीहरूको लागि तयार हुँदैनन्; त्यसो भए तिनीहरू जन्ममा प्रवेश गर्छन् र त्यसपछि जीवन र कार्यलाई जारी राख्छन् जुन उनीहरूको अघिल्लो जीवन द्वारा मांग गरिएको थियो।
स्वर्ग प्रवेश गर्न, एक को लागी स्वर्ग बनाउँछ के सोच्न र गर्नुपर्छ। स्वर्ग मृत्यु पछि बनेको छैन। स्वर्ग मानसिक आलस्यले बनाएको हुँदैन, केहि नगरी, ढुकुरले, समय सुस्त गरेर, वा जाग्ने बित्तिकै सुस्त सपना देखेर, र उद्देश्य बिना। स्वर्ग आफ्नै र अरूको आध्यात्मिक र नैतिक कल्याणको सोचबाट बनाइएको हो र त्यस्तो लक्ष्यमा लगनशील भई कमाईन्छ। कसैले स्वर्गको आनन्द उठाउन सक्दछ जुन उसले आफैंले बनाएको हो; अर्कोको स्वर्ग उसको स्वर्ग होइन।
यसको भौतिक शरीरको मृत्यु पछि, दिमागले उन्मूलनको प्रक्रिया शुरू गर्दछ जसबाट स्थूल र कामुक चाहनाहरू, दुर्गुणहरू, अनुभूतिहरू, र भूखहरू जलाइन्छ वा सुस्त हुन्छ। यी ती चीजहरू हुन् जो घटेका र धोकामा परेका, धोका दिए र भ्रममा पारे र भ्रममा पारे र शारीरिक जीवनमा रहँदा यसले पीडा र कष्ट भोग्यो र जसले वास्तविक खुशीलाई जान्नबाट रोक्छ। यी चीजहरूलाई अलग राख्नुपर्दछ र अलग गर्नुपर्दछ ताकि दिमागले आराम र आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ, र ती आदर्शहरु जुन जीवनको लागि तृष्णा गरिएको थियो बाहिर जीउन सक्छ, तर शारीरिक जीवनमा प्राप्त गर्न असमर्थ छ।
स्वर्ग प्रायः दिमागका लागि आवश्यक छ जति सुत र आराम शरीरको लागि हो। जब सबै कामुक चाहनाहरू र विचारहरू राखेर दिमागले टाढा गरिन्छ, तब यो स्वर्गमा प्रवेश गर्दछ जुन पहिले आफैले तयार पारेको थियो।
मृत्यु पछि यो स्वर्ग पृथ्वीको कुनै खास ठाउँ वा स्थानमा भन्न सकिदैन। भौतिक जीवनमा जीवनको लागि ज्ञात पृथ्वी स्वर्गमा देख्न वा सेन्स गर्न सकिँदैन। स्वर्ग मापन मानेको छैन जुन पृथ्वी नाप्यो।
स्वर्गमा प्रवेश गर्ने एक कानून कानून द्वारा शासित छैन जसले पृथ्वीमा शारीरिक शरीरहरूको आन्दोलन र कार्यहरू नियमित गर्दछ। जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँ हिंड्नुहुन्न, न त उहाँ उड्नुहुन्छ, न त ऊ मांसपेशिको प्रयासले हिंड्दछ। उसले स्वादिष्ट खाना खाँदैन, न त मीठो रस पिउँछ। उसले सुन्न वा तारा, काठ वा धातुको उपकरणहरूमा संगीत वा ध्वनि उत्पादन गर्दैन। उहाँ पृथ्वीमा अवस्थित चट्टान, रूख, पानी, घर, पोशाक देख्नुहुन्न, न त पृथ्वीमा कुनै पनि प्राणीको भौतिक रूप र विशेषताहरू देख्नुहुन्छ। मोटो ढोकाहरू, यास्पर सडकहरू, मीठा खानाहरू, पेय पदार्थहरू, बादलहरू, सेता सिंहासनहरू, वीणा र करूबहरू पृथ्वीमा अवस्थित हुन सक्छन्, ती स्वर्गमा फेला पर्दैन। मृत्यु पछि प्रत्येकले आफ्नै स्वर्ग बनाउँछ र आफ्नै एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ। त्यहाँ कुनै सामान किन्न वा बेच्न वा पृथ्वीका कुनै पनि उत्पादनहरू छैनन्, यी आवश्यक छैनन्। व्यापार लेनदेन स्वर्ग मा चालित छैन। सबै व्यवसाय पृथ्वीमा उपस्थित हुनु पर्छ। एक्रोब्याटिक feats र शानदार प्रदर्शन, यदि साक्षी छ भने, पृथ्वी मा देख्न पर्छ। स्वर्गको व्यवस्थापनका लागि त्यस्ता कलाकारहरूको व्यवस्था गरिएको छैन, र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा कोही पनि रुचि राख्दैनन्। स्वर्गमा कुनै राजनैतिक नोकरी छैन, किनकि त्यहाँ कुनै भरिने ठाउँ छैनन्। स्वर्गमा कुनै गुट वा धर्महरू छैनन्, किनकि हरेकले आफ्नो चर्चलाई पृथ्वीमा छोडेका छन्। न त त्यहाँ फैशनेबल र विशिष्ट समाजको कुलीन भेट्टाउनेछ किनकि ब्रॉडक्लोथ, रेशम र लेस जुन समाजमा लुगा लगाइन्छ स्वर्गमा अनुमति छैन, र पारिवारिक रूख रोप्नु हुँदैन। स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले लि and्ग, कोटिंग्स र पट्टिहरू र त्यस्ता सबै श्रृ .्खलाहरू हटाउनुपर्नेछ किनकि स्वर्गमा सबै त्यस्तै छन् जस्तो गरी तिनीहरू सजिलै चिनिन सक्दछन्, छल र झूटको भेष बिना।
शारीरिक शरीर एकपटक राखिएको छ पछि, अवतार थियो जो दिमाग बाहिर फेंक र आफ्नो शारीरिक इच्छा को कुण्ड बाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्न थाल्छ। जब यो बिर्सिन्थ्यो र तिनीहरूबाट अनजान हुन्छ, बिस्तारै दिमाग जागृत हुन्छ र यसको स्वर्गको संसारमा प्रवेश गर्दछ। स्वर्गका लागि आवश्यक चीजहरू खुशी र चिन्ता हुन्। केहि पनि स्वीकार्य छैन जसले खुशीलाई रोक्न वा हस्तक्षेप गर्दछ। कुनै पनि प्रकारको झगडा वा झगडा स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन। खुशीको क्षेत्र, स्वर्गको संसार, यस्तो भव्य, श्रद्धा प्रेरणादायक वा उदात्त होइन किनकि दिमागलाई तुच्छ वा स्थानको बाहिर महसुस गर्दछ। न त स्वर्ग यति उदासीन, साधारण, बेरोजगार वा नीरस छ कि दिमागले आफूलाई राज्यमा उच्च र असमर्थ मान्दछ। स्वर्ग भित्र प्रवेश गर्ने मन हो, सबै कि दिमाग किन्छ कि सबै (इन्द्रियहरु को छैन) यसको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा व्यापक खुशी।
स्वर्गको खुशी चिन्तन द्वारा छ। सोच स्वर्गको निर्माता र फैशनर र निर्माता छ। सोच्दछ आपूर्ति र स्वर्ग को सबै नियुक्तिहरु को व्यवस्था। विचारले स्वर्गमा भाग लिने अरू सबैलाई स्वीकार्दछ। विचारले के गरेको हो निर्धारण गर्दछ, र कुन तरीकाले यो गरिन्छ। तर खुशीका विचारहरू मात्र स्वर्ग निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन्द्रियहरु एक मनको स्वर्ग मा प्रवेश गर्न सक्छन् केवल डिग्री कि तिनीहरू सोच द्वारा खुशी गर्न आवश्यक गरिएको छ। तर यस प्रकारले प्रयोग गरिएको इन्द्रियहरु पृथ्वीको इन्द्रिय भन्दा बढी परिष्कृत प्रकृतिको हुन्छन् र स्वर्गको सोचसँग कुनै विवादास्पद भएमा मात्र उनीहरूलाई काम गर्न सकिन्छ। इन्द्रिय वा इन्द्रिय जुन शरीरसँग सम्बन्धित छ स्वर्गमा यसको कुनै अंश वा स्थान हुँदैन। त्यसोभए यी स्वर्गका इन्द्रियहरू कस्तो किसिमका हुन्छन्? तिनीहरू अस्थायी रूपमा र अवसरको लागि दिमागले बनाएका इन्द्रियहरू हुन्, र टिकेनन्।
यद्यपि पृथ्वी यस पृथ्वीमा नदेखाईएको जस्तो नै संवेदनाहीन छैन, तैपनि पृथ्वीले दिमागले विचार गरिरहेको हुन्छ जब त्यो दिमागका विचारहरूले कुनै आदर्शको विस्तारमा पृथ्वीसँग सम्बन्धित छ। तर स्वर्गमा पृथ्वी तब एक आदर्श पृथ्वी हो र दिमागले वास्तविक शारीरिक अवस्थामा कठिनाइहरूको साथमा महसुस गर्दैन जुन यसले शारीरिक शरीरमा थोपेको छ। यदि मानव चिन्ताले पृथ्वीको केही स्थानहरूको बसोबास र सुन्दर बनाउने, पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्था सुधार गर्ने र आफ्नै र अरूको साझा भलाइको लागि फाइदाको लागि उनीहरूलाई फिर्ता दिने वा शारीरिक सुधार गर्ने कुरामा चिन्तित भएको भए, नैतिक र मानसिक अवस्था कुनै पनि हिसाबले, तब पृथ्वी वा पृथ्वीको इलाका जुन उसले आफैंलाई चिन्ता गर्‍यो, स्वर्गमा ऊ ठूलो सोचमा साकार हुनेछ, उसको विचारले, र उसले बाधा र अवरोध बिना। शारीरिक जीवनमा झगडा गरेको थियो। चिन्तनले आफ्नो मापन स्टिकको स्थान लिन्छ र दूरी विचारमा गायब हुन्छ। पृथ्वीमा र उनको आदर्श विचार अनुसार ऊ स्वर्गमा पनि यसको अनुभूति हुन्छ; तर परिश्रम र श्रम बिना सोच्ने कोशिस नगरी, किनभने वास्तविकता ल्याउने सोच पृथ्वी मा गठन गरिएको छ र केवल स्वर्गमा बाहिर बस्न। स्वर्ग मा सोचाई पृथ्वी मा गरिएको थियो जो सोच को आनंद र परिणाम हो।
मन लोममोसनको विषयको साथ चिन्तित हुँदैन जबसम्म यो पृथ्वीमा हुनुहुँदा यसको आदर्शसँग सम्बन्धित थिएन र धेरै स्वार्थ बिना नै विचार गरिएको थियो। एक आविष्कारक जसको पृथ्वीमा सोचाइ आविष्कारबाट पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि कुनै गाडी वा लोकोमोसनको साधनसँग सम्बन्धित छ, यदि ऊ स्वर्गमा पस्छ भने, बिर्से र पृथ्वीमा आफ्नो कामको बारेमा पूर्णतया अनजान हुन्छ। एक आविष्कारकको मामला जसको आदर्श जनताको अवस्थालाई राम्रो बनाउन वा मानवीय उदेश्यका साथ कठिनाइहरूको ब्यक्तिबाट छुटकारा पाउनको लागि यस्तो गाडी वा उपकरणलाई पूर्ण गर्नका लागि थियो र जसको सोचाइ पनि उसले बनाएको थियो र केही अमूर्त प्रस्ताव प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले आविष्कार पूर्ण गर्ने - जबसम्म उसको सोचाइ पैसा कमाउने कुराको प्रमुख वा सत्तारुढ सोचाइ नभएसम्म कामको आविष्कारकको स्वर्गमा भाग हुन्छ र त्यहाँ उसले पूर्णरूपमा पूरा गर्छ पृथ्वीमा महसुस गर्न असमर्थ भएको थियो।
यसको स्वर्गको संसारमा दिमागको आवागमन वा यात्रा श्रमसाध्य हिडेर वा पौडी खेलेर वा उडानले गरेको हुँदैन, तर विचारले। चिन्तन भनेको त्यस्तो माध्यम हो जसबाट दिमाग एक इलाकाबाट अर्को स्थानमा जान्छ। यो सोचाइ गर्न सक्छ शारीरिक जीवन मा अनुभव छ। एक मानिसलाई सोच्दै पृथ्वीको सबैभन्दा टाढाका ठाउँहरूमा सार्न सकिन्छ। उसको भौतिक शरीर जहाँ छ त्यहाँ रहन्छ, तर उसको विचार जहाँ ऊ जहाँ जान्छ र विचारको द्रुतताको साथ यात्रा गर्दछ। न्यूयोर्कबाट अल्बानीमा जस्तै न्यु योर्कबाट ह Kongक toमा आफैलाई ढुवानी गर्न यत्तिको सजिलो छ र अब लामो समय आवश्यक छैन। एक मानिस आफ्नो कुर्सीमा बसिरहेको बेला आफैलाई सोच्ने अनुपस्थित हुन सक्छ र टाढा रहेको ठाउँमा फेरि भेट्न सक्दछ जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र विगतका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा फेरि बाँच्न सक्नुहुन्छ। उसको अनुहारमा माडीमा पसिना आउन सक्छ किनकि ऊ ठूलो मांसपेशि श्रम गर्दछ। उसको अनुहार रंगमा डुब्न सक्छ किनकि उहाँ विगतमा फर्केर जाँदा केही व्यक्तिगत पीडा फेरि भेट्नुहुन्छ, वा कुनै ठूलो खतराबाट पार गर्ने बित्तिकै यो एशेन पेल्लरमा परिणत हुन सक्छ, र सबै समयमा ऊ आफ्नो शारीरिक शरीरको बारेमा अनजान हुनेछ। र यसका वरिपरिका बाहेक जब सम्म ऊ अवरोध र सम्झना हुँदैन वा ऊ कुर्सीमा उसको शारीरिक शरीरमा सोचमा फर्किए सम्म।
जसरी एक व्यक्तिले आफ्नो शरीर र शरीरको बारे थाहा नपाई भौतिक शरीरको माध्यमबाट अनुभव गरेका कुराहरुलाई सोच्न र पुनः अभिनय गर्न सक्दछ, दिमागले पनि आफ्नो उत्तम कार्यहरु र विचारहरु अनुसार स्वर्गमा आदर्श रुपमा कार्य गर्न र पुनः जीवित हुन सक्छ। पृथ्वीमा हुँदा। तर विचारहरु विचारबाट सबै अलग गरी दिईन्छ जुन दिमागलाई आदर्श रुपमा खुशी हुनबाट रोक्दछ। पृथ्वीको जीवनको अनुभव गर्न दिमागले प्रयोग गरेको शरीर भौतिक शरीर हो; दिमाग दिमागले स्वर्गमा आफ्नो खुशी अनुभव गर्न प्रयोग गरेको यसको शरीर हो। भौतिक शरीर जीवन र शारीरिक संसार मा कार्य गर्न उपयुक्त छ। यो चिन्तन शरीर जीवनको समयमा दिमागले सिर्जना गरेको हुन्छ र मृत्यु पछि रूप लिन्छ र स्वर्ग अवधि भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। यस चिन्तनको शरीरमा मन स्वर्गमा रहन्छ। चिन्तन शरीर दिमागले यसको स्वर्गको संसारमा बस्न प्रयोग गर्दछ किनभने स्वर्गीय विश्व विचारको प्रकृति हो, र सोचबाट बनेको छ, र सोचाइ शरीरले स्वर्गीय संसारमा प्राकृतिक रूपमा कार्य गर्दछ जस्तै भौतिकमा शरीर गर्दछ संसार भौतिक शरीरलाई खाना चाहिन्छ, भौतिक संसारमा यसलाई कायम राख्न। दिमागलाई स्वर्गको संसारमा आफ्नो सोचाइ राख्नको लागि खाना पनि चाहिन्छ, तर खाना शारीरिक हुन सक्दैन। त्यहाँ प्रयोग गरिएको खाना विचारको हो र विचारहरू जुन मनोरञ्जन थियो जुन दिमाग पृथ्वीमा हुँदा शरीरमा थियो। जब मानिस पढिरहेको थियो, सोचिरहेको थियो र पृथ्वीमा छँदा आफ्नो कामको आदर्श बनाउँदै थियो, तब उसले स्वर्गबाटको खाना तयार गर्यो। स्वर्गीय काम र चिन्तन मात्र खानाको एक प्रकार हो जुन यसको स्वर्गको संसारमा दिमागले प्रयोग गर्न सक्छ।
दिमागले स्वर्गमा वाणी र संगीत महसुस गर्न सक्छ, तर केवल विचार मार्फत। जीवनको गीत क्षेत्रका संगीतको साथमा हुनेछ। तर गीत आफ्नै सोच द्वारा र पृथ्वीमा छँदा आफ्नै विचारहरु द्वारा रचना गरिएको छ। संगीत अन्य दिमागको स्वर्गको संसारको क्षेत्रबाट हुनेछ, किनकि तिनीहरू एकरूपतामा छन्।
दिमागले अन्य दिमाग र स्वर्गमा रहेका चीजहरूलाई स्पर्श गर्दैन, किनकि भौतिक चीजहरूले पृथ्वीमा अन्य भौतिक शरीरहरूलाई सम्पर्क गर्दछ। यसको स्वर्गमा दिमागको शरीर, जुन चिन्तनको शरीर हो, विचारले अन्य शरीरलाई छुन्छ। अरूलाई मासुको मांसपेशी मात्र छुन्छ वा मासुले मासुको स्पर्शले छुन्छ भने उसले चिन्ताको साथ मनले दिने आनन्दको कदर गर्दैन। खुशी विचार को साथ विचार को लागी, लगभग, महसुस गरीरहेको छ। मासुको मासुको सम्पर्कले आनन्द कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। स्वर्ग कुनै एक्लो ठाउँ वा राज्य होइन जहाँ हरेक दिमाग एक रहित स्वर्गको एक्लोपनामा सीमित छ। हर्मिट्स, एक्लो रिक्ल्युज र मेटाफिशिशियनहरू जसको विचारहरू व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा विचार गर्दा वा अमूर्त समस्याहरूले चिन्तित भएका हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वर्गमा रमाउन सक्दछन्, तर यो विरलै मात्र हुन्छ कि एउटा दिमागले सबै मानिस वा अन्य दिमागलाई स्वर्गको संसारबाट अलग गर्न सक्छ।
स्वर्ग जो मान्छे मरे पछि बस्छ उसको आफ्नै मानसिक वातावरणमा हुन्छ। यसै द्वारा उहाँ घेरिनुभयो र यसमा उहाँ आफ्नो शारीरिक जीवनको अवधिमा जीवित हुनुहुन्छ। मानिस आफ्नो मानसिक वातावरणको बारेमा सचेत हुँदैन, तर मरे पछि उसको सचेत हुन्छ, र त्यसपछि वातावरणको रूपमा होइन, स्वर्गको रूपमा। ऊ पहिला स्वर्गबाट ​​पस्नु भन्दा पहिले उसको मानसिक वातावरणबाट बाहिर निस्कनु पर्छ। शारीरिक जीवनको क्रममा मृत्यु पछि उसको स्वर्ग बनाउने विचारहरु उसको मानसिक वातावरणमा रहन्छन्। ती हुन्, धेरै हदसम्म, बाँचेका छैनन्। उहाँको स्वर्ग विकासमा, जीवित रहन र यी आदर्श विचारहरूको साकारमा समावेश छ; तर सबै पटक, यो याद राख्नुहोस्, उहाँ आफ्नै वातावरणमा हुनुहुन्छ। यस वातावरणबाट बाहिर कीटाणु सुसज्जित छ जहाँबाट उनको अर्को भौतिक शरीर निर्माण हुन्छ।
प्रत्येक दिमागको आफ्नो व्यक्तिगत स्वर्गमा बस्दछ र बाँच्दछ, किनकि हरेक दिमाग आफ्नो शारीरिक शरीर र भौतिक संसारमा आफ्नै वातावरणमा बस्दछ। तिनीहरूको सम्बन्धित स्वर्गमा सबै दिमागहरू महान स्वर्गको संसारमा समाहित हुन्छन्, जसरी मानिसहरू शारीरिक संसारमा समावेश छन्। दिमाग स्वर्गमा अवस्थित छैन किनकि मानिसहरू पृथ्वीमा स्थान र स्थानमा छन्, तर दिमाग आफ्नो आदर्श र विचारहरूको गुणस्तरको आधारमा त्यस अवस्थामा छ। दिमागले आफूलाई स्वर्गमा महान् स्वर्गको संसारमा आफैंले बन्द गर्न सक्दछ र अरू गुणहरू जस्तै गुण वा शक्तिको सम्पर्कबाट टाढा रहन सक्छ, जसरी एक व्यक्तिले आफूलाई सारा मानव समाजबाट टाढा राख्दा संसारबाट अलग हुन्छ। प्रत्येक दिमाग अर्को मनको स्वर्गमा वा अन्य सबै दिमागसँग भाग लिन सक्दछ जुन उनीहरूको आदर्शहरू उस्तै छ र उनीहरूको विचारहरू धुनमा रहेको डिग्रीसम्म, त्यस्तै प्रकारको मायालु आदर्शका मानिसहरु सँगै कोरिएका छन् र मानसिक संगतिको मजा लिन सक्छन्। चिन्तन मार्फत।
स्वर्गको संसार निर्माण र सोचले बनेको छ, तर त्यस्ता विचारहरूले मात्र खुशीलाई योगदान पुर्‍याउँछन्। यस्ता विचारहरु: उसले मलाई लुट्यो, उसले मलाई मार्नेछ, उसले मेरो बारेमा बदनाम गर्छ, उसले मलाई झूटो भन्यो, वा म ऊसँग डाह गर्छु, म उसलाई घृणा गर्दछु, म त्यसलाई घृणा गर्दछु, स्वर्गमा कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। यो मानिनु हुँदैन कि स्वर्ग एउटा सुस्त ठाउँ वा राज्य हो किनभने यो यस्तो अनिश्चित र असुरक्षित सामानले बनाएको हुन्छ जसको विचारहरू। मानवको मुख्य खुशी पृथ्वीमा, यो भए पनि, उहाँकै विचारबाट आउँदछ। पृथ्वीका पैसा राजाहरूले आफ्नो सुनको केवल होर्डि by गरेर खुशी पाउँदैनन्, तर उनीहरूको आफ्नो सम्पत्ति र त्यसमा हुने शक्तिको सोचमा। एउटी महिलाले फिनालेको धेरै टुक्राहरूबाट खुशीको सानो मात्रा पाउँदैनन् जुन गाउनको श्रृंगारमा प्रयोग हुन्छन् र त्यो गाउनको पहिरनबाट, तर उनको खुसी यो सोचबाट आउँदछ कि यसले उनलाई सुन्दर बनाउँदछ र यो अरूबाट प्रशंसा आदेश हुनेछ। एक कलाकारको खुशी आफ्नो काम को उत्पादन मा छैन। यो बिचार पछाडि खडा छ जुन उसलाई रमाईलो छ। एक शिक्षक केवल यो तथ्यबाट मात्र खुशी हुँदैन कि विद्यार्थीहरूले गाह्रो सुत्रहरू कण्ठ गर्न सक्षम छन्। उनको सन्तुष्टि त्यो विचारमा निहित छ जुन उनीहरूले बुझेका छन् र लागू गरेका हुन्छन् जुन उनीहरूले कण्ठ गरेका छन्। थोरै खुशी जुन मानिस पृथ्वीमा हुन्छ, ऊ केवल आफ्नो बिचारबाट प्राप्त हुन्छ, र कुनै शारीरिक कब्जा वा सफलताबाट होइन। पृथ्वीमा विचारहरु अमूर्त र अवास्तविक देखिन्छन्, र सम्पत्ति धेरै वास्तविक देखिन्छन्। स्वर्गमा ज्ञानेन्द्रियहरु हराइसकेका छन्, तर विचारहरु वास्तविक छन्। स्थूल भावशून्य रूपको अभावमा र विचारहरूको विषयहरूको वास्तविकता र वास्तविकतामा दिमाग अस्वाभाविक रूपमा बढी आनन्दित हुन्छ सामान्य मानिसको इन्द्रिय पृथ्वीमा हुँदा आफ्नो इन्द्रियबाट हुन्छ।
ती सबै जो पृथ्वीमा छँदा हाम्रो विचारमा प्रवेश गरे, वा जसका साथ हाम्रो विचार केही आदर्शको प्राप्तिको लागि निर्देशित थियो, तिनीहरू सोच्दै उपस्थित हुनेछन् र हाम्रो स्वर्ग बनाउन सहयोग गर्नेछन्। त्यसोभए कोही साथीहरू स्वर्गबाट ​​बन्द गर्न सक्दैन। सम्बन्ध यसको स्वर्ग संसारमा दिमागले जारी राख्न सक्छ, तर मात्र यो सम्बन्ध एक आदर्श प्रकृति को हो र यो शारीरिक र शारीरिक रूपमा सम्म छैन। भौतिकता स्वर्गमा कुनै भाग छैन। स्वर्गमा सेक्स वा यौन क्रियाको बारेमा सोचेको छैन। केहि दिमागहरू शारीरिक शरीरमा अवतार लिंदा, सधैं नै "पति" वा "पत्नी" को विचारलाई कामुक क्रियाकलापहरूसँग जोड्दछन्, र उनीहरूलाई आफ्नो शारीरिक सम्बन्धको सोचाइ बिना पति र पत्नीको सोच्न गाह्रो हुन सक्छ। पतिपत्नी र श्रीमतीको बारेमा सोच्न अरुलाई गाह्रो हुँदैन, साथीहरू काममा व्यस्त रहेको जस्तो कि साझा आदर्शको लागि वा निःस्वार्थ र कामुक प्रेमको विषयको रूपमा। जब संवेदनशील झुकाव दिमागले यसको भौतिक शरीरबाट अलग हुन्छ र यसको स्वर्गको संसारमा प्रवेश गरेको छ, यसले पनि सेक्सको विचार गर्दैन किनकि यो आफ्नो शरीरिक शरीर र यसको कामुक भूखबाट छुट्टिनेछ र यसको स्थूलबाट शुद्ध हुनेछ। चाहना
बच्चाको मृत्युबाट अलग्गिएको जस्तो देखिने आमाले यसलाई फेरि स्वर्गमा भेट्न सक्दछ, तर स्वर्ग पृथ्वी भन्दा फरक भएकोले आमा र बच्चा पृथ्वीमा भएकाहरू भन्दा स्वर्गमा फरक हुनेछन्। आफ्नी छोरीलाई केवल स्वार्थी चासोको रूपमा हेर्ने आमाले र त्यो बच्चालाई उसको आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्छिन्, त्यस्ता बच्चाको चाहना गर्दैनन् न त स्वर्गमा उहाँसँगै राख्न सक्नुहुनेछ किनभने शारीरिक स्वामित्वको यस्तो स्वार्थी सोच सोच्नको लागि विदेशी हो र हो स्वर्गबाट ​​बहिष्कृत। स्वर्गमा आफ्नो बच्चालाई भेट्ने आमा स्वार्थी आमाले आफ्नो शारीरिक बच्चालाई वहन गर्छिन् जब उनी शारीरिक संसारमा हुन्छन्, भन्दा उनको सोचमा निर्देशित भएको व्यक्तिको लागि बिभिन्न दृष्टिकोण राख्दछ। निःस्वार्थ आमाको प्रभुत्वका विचारहरू प्रेम, सहयोग र सुरक्षा हुन्। त्यस्ता विचारहरू नष्ट हुँदैनन् र मृत्युबाट बाधा पनि आउँदैनन्, र आफ्नी बच्चाको लागि पृथ्वीमा छँदा यस्तो विचार राख्ने आमाले तिनीहरूलाई स्वर्गमा राख्नुहुनेछ।
कुनै मानव दिमाग सीमित छैन वा यसको शारीरिक शरीरमा निहित छैन र हरेक मानव दिव्य अवतारमा स्वर्गमा उसका आफ्नै पिता हुन्छन्। त्यो दिमाग जसले पृथ्वीको जीवनलाई छोडिदियो र स्वर्गमा प्रवेश गर्यो, र जसको उत्तम विचारहरू यस संसारमा चिनेको मानिसहरूतर्फ निर्देशित वा चिन्तित भएका थिए, यदि पृथ्वीमा दिमागले सोचाइमा पुग्दछ भने पृथ्वीमा भएकाहरूको दिमागलाई असर गर्न सक्छ।
स्वर्गमा आमाले उनीसँग बोक्ने बच्चाको सोच यसको आकार र आकारको हुँदैन। शारीरिक जीवनमा उनी आफ्नो बच्चालाई शिशुको रूपमा, स्कूलमा बच्चाको रूपमा, र पछि सायद बुबा वा आमाको रूपमा चिन्थिन्। यसको शारीरिक शरीरको सबै क्यारियर को माध्यमबाट उनको बच्चाको आदर्श विचार परिवर्तन भएको छैन। स्वर्गमा, उनको बच्चाको आमाको विचारले यसको शारीरिक शरीर समावेश गर्दैन। उनको विचार मात्र आदर्शको हो।
प्रत्येकले स्वर्गमा आफ्ना साथीहरूलाई डिग्रीमा भेट्छ कि उसले पृथ्वीमा ती साथीहरूलाई चिन्छ। पृथ्वीमा उसको साथीको सुई वा चन्द्र आँखा, एउटा बटन वा बोतलको नाक, चेरी जस्तो मुख, एउटा थाल वा पेटी छाला, नाशपातीको आकारको टाउको वा टाउको गोलीको जस्तो टाउको, अनुहार जस्ता अनुहार हुन सक्छ। ह्याचेट वा स्क्वाश उसको रूप अरूलाई अपोलो वा स्याररको जस्तो हुन सक्छ। यी प्राय: भेषहरू र मास्क हुन् जुन उसका साथीहरूले पृथ्वीमा लगाउँछन्। तर यदि उसलाई उसको साथीले चिन्छ भने यी भेषमा छेड्नेछ। यदि उसले आफ्नो साथीलाई पृथ्वीको वेशमा देख्यो भने ऊ उसलाई स्वर्गको संसारमा चिनेको हुन्छ।
स्वर्गमा भएका चीजहरू यस पृथ्वीमा भएको जस्तो हामीले देख्नुपर्दछ वा राख्नुपर्दछ भन्ने आशा गर्नु उचित होइन वा स्वर्ग हामीले चाहेका नभएसम्म अवांछनीय हुनेछ भन्ने महसुस गर्नु उचित हुँदैन। मानिस विरलै चीजहरू त्यस्तै देख्दछन्, तर जस्तो कि उसले सोच्छ कि ती हुन्। ऊ आफ्नो सम्पत्तीको मूल्य बुझ्दैन। वस्तुहरु आफैं मा पृथ्वी को हो र भावनाहरु को आफ्नो शारीरिक अंगहरु द्वारा बुझेको छ। यी वस्तुहरूको मात्र विचार स्वर्गमा लिन सकिन्छ र त्यस्ता विचारहरू मात्र स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दछन् जसले दिमागको खुशीमा योगदान पुर्‍याउँछ। तसर्थ उही दिमाग जुन पृथ्वीमा शरीरमा सोचाइ राख्ने व्यक्तिले कुनै कुराको क्षति भोग्नेछैन जसलाई आफ्नो खुशीमा योगदान दिन सक्दैन। जसलाई हामी पृथ्वीमा प्रेम गर्दछौं, र जसलाई प्रेम गर्न हाम्रो आनन्दको लागि आवश्यक छ, तिनीहरूले कष्ट भोग्नेछैनन् किनकि तिनीहरूका दोष र दुर्गुणहरू हामीसँग स्वर्गमा सोचेका छैनन्। जब हामी उनीहरूको गल्तीबिना उनीहरूलाई सोच्न सक्दछौं र हामी उनीहरूलाई आदर्शको रूपमा सोच्दछौं तब हामी अझ बढी तिनीहरूको मूल्यांकन गर्नेछौं। हाम्रा साथीहरूको गल्तीहरू पृथ्वीमा हाम्रो आफ्नै गल्तीहरूसँग टकराउँदछन्, र मित्रताको आनन्द मार्ड र क्लाउड भएको छ। तर कुनै दोषविनाको मित्रता स्वर्गको संसारमा राम्ररी बुझ्न सकिन्छ, र हामी उनीहरूलाई साँच्चिकै चिन्छौं जुन तिनीहरू पृथ्वीको छेउछाउमा देखा पर्दा भन्दा बढी हो।
स्वर्गमा रहेका दिमागले पृथ्वीमा वा पृथ्वीमा कुनै पनि कुराकानी गर्न असम्भव छैन। तर त्यस्तो संचार कुनै पनि मनोवैज्ञानिक घटनाको उत्पादन द्वारा संचालित हुँदैन, न त यो प्रेतवादी स्रोतहरूबाट आउँदछ न त भूतविद्हरूले आफ्नो “आत्मिक संसार” वा “समरल्याण्ड” भनेर बताउने कुरा हो। स्वर्गमा दिमाग “आत्मा” होइन। जसको विषयमा प्रेतवादीहरू बोल्छन्। दिमागको स्वर्ग संसार आत्मिक संसार वा प्रेतवादीको ग्रीष्मभूमि होईन। ग्रीष्म landतुको भुमरीमा स्वर्गको मन घुसाउँदैन र बोल्दैन, न त स्वर्गमा रहेको दिमागले कुनै पनि असाधारण तरिकामा प्रेतवादी वा यसका मित्रहरूलाई प्रकट गर्दछ। यदि स्वर्गमा दिमाग ग्रीष्मभूमिमा प्रवेश गरेको हो वा एक प्रेतवादीको रूपमा देखा पर्दछ वा शारीरिक रूपमा देखा पर्दछ र हात मिलाउछ र शारीरिक शरीरमा आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्दछ, तब त्यो दिमाग पृथ्वी र शरीरको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ। र जसको पीडित, पीडित वा अपूर्णता को यो संग कुराकानी को, र यी को विपरीत यसको बाधा र बाधा हुनेछ यसको खुशी र स्वर्ग दिमाग को एक अन्त मा हुनेछ। जबकि स्वर्ग स्वर्ग मा यसको खुशी बाधा हुनेछैन; यो पृथ्वीमा भएका कुनै पनि दुर्गुण वा गल्ती वा पीडितको बारेमा थाहा छैन, र स्वर्गको अन्त्य नभएसम्म यसले स्वर्ग छोड्दैन।
स्वर्गमा दिमागले पृथ्वीमा कसैसँग मात्र विचार र चिन्ताको माध्यमबाट कुरा गर्न सक्छ र यस्तो सोच र संचार सदैव ennoblement र राम्रोको लागि हुन्छ, तर पृथ्वीमा कसैलाई जीवन दिन कसरी कमाउने, वा कसरी आफ्नो इच्छालाई पूरा गर्ने भनेर सल्लाह दिन वा वा मात्र संगति को सान्त्वना दिन। जब स्वर्गमा एक मन पृथ्वीमा एक संग कुराकानी गर्दछ, यो सामान्यतया व्यभिचारिक सोच द्वारा हुन्छ जसले केही राम्रो कार्यको सुझाव दिन्छ। हुनसक्छ यस सुझावलाई स्वर्गमा भएको साथीको बारेमा सोच्न पनि सकिन्छ, यदि सुझाव दिएमा त्यो चरित्रसँग सम्बन्धित छ वा पृथ्वीमा उसको कामको बारेमा। जब स्वर्गमा रहेको विचार पृथ्वीमा दिमागले ग्रहण गर्दछ, यो सोचाइले कुनै पनि घटनाबाट आफूलाई संकेत गर्दैन। कुराकानी एक्लो सोचको माध्यमबाट हुनेछ। आकांक्षाको क्षणहरूमा र उपयुक्त अवस्थामा, पृथ्वीमा मानिस आफ्नो विचार स्वर्गमा एक बताउन सक्छ। तर त्यस्तो सोचाइको कुनै पार्थिव कलंक हुन सक्दैन र यो आदर्शसँग मिल्नुपर्दछ र स्वर्गमा दिमागको खुशीसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ, र मृतकको व्यक्तित्वसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। जब स्वर्गमा दिमाग र पृथ्वीमा दिमागको सञ्चार हुन्छ, स्वर्गमा दिमागले अर्को पृथ्वीको बारेमा सोच्दैन, न त पृथ्वीमा भएको मान्छेले अर्को स्वर्गको बारेमा सोच्दछ। संचार केवल तब हुन सक्छ जब दिमाग एक अर्कामा अनुरेखित हुन्छन्, जब स्थान, स्थान, सम्पत्ति, विचारलाई असर गर्दैन र जब विचार दिमागको साथ दिमाग हो। कि साधारण व्यक्ति गर्भवती छैन। यदि यस्तो कुराकानी आयोजित गरिएको छ भने, समय र ठाउँ देखा पर्दैन। जब यस कुराकानी मा स्वर्ग मा मन पृथ्वी मा तल आउँदैन, न त मानिस स्वर्ग मा उक्लन्छ। यस्तो सोचको अभिव्यक्ति पृथ्वीको उच्च दिमागमा हुन्छ।
आदर्शमा भिन्नता र विचारहरु र मानिसहरुको विचारहरु र आकांक्षा को शक्ति, स्वर्ग को लागी सबै एक समान छैन। प्रत्येक प्रविष्ट हुन्छ र बुझ्छ र यसलाई उसले आफ्नो खुशीको लागि चाहेको कुराको पूर्तिको रूपमा प्रशंसा गर्दछ। मानिसहरुको विचार र आदर्शमा रहेको भिन्नताले मृत्यु पछि मानिसहरुसंग रमाईलो भएको विभिन्न आकाशहरुको संख्या र ग्रेडिंग को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
त्यहाँ दिमाग जति छन् आकाशहरू छन्। तर सबै एक स्वर्गको संसार भित्र छन्। प्रत्येक स्वर्ग मा खुशी मा कुनै पनि तरिका मा अरूको खुशी संग हस्तक्षेप बिना जीवन। यो खुशी, यदि मापन गरियो भने, समय र पृथ्वीको अनुभवको हिसाबले, यो अन्तहीन अनन्तता जस्तो देखिन्छ। पृथ्वीको वास्तविक सर्तहरूमा यो एकदम छोटो हुन सक्छ। स्वर्गमा एक को लागी अवधि एक अनन्त काल हुनेछ, जुन अनुभव वा विचार को एक पूर्ण चक्र हो। तर समयावधि अन्त्य हुनेछ, यद्यपि अन्त स्वर्गमा कसैलाई पनि खुशीको अन्त्य जस्तो देखिँदैन। यसको स्वर्गको सुरुवात अचानक वा अप्रत्याशित जस्तो देखिँदैन। स्वर्गको अन्त्य र सुरूवात एक अर्कामा चल्दछ, यसको मतलब हो पूरा वा पूर्ति र यी शब्दहरु पृथ्वीमा बुझिए पछि कुनै पछुतो वा आश्चर्यको कारण हुँदैन।
स्वर्ग अवधि जब यो आदर्श विचारहरु द्वारा निर्धारित गरिएको थियो र मृत्यु अघि लामो वा छोटो होईन, तर पूर्ण छ र समाप्त हुन्छ जब दिमागले आफ्नो श्रमबाट विश्राम लिएको छ र थकित हुन्छ र यसका आदर्श विचारहरु लाई आत्मसात् गर्दछ जुन यस पृथ्वीमा महसुस भएको थिएन, र यस आत्मसन्तुष्टिबाट बल र स्फूर्ति प्राप्त गरिएको छ यसबाट छुटकारा पाउँदा र यस पृथ्वीमा भोगेको चिन्ता, चिन्ता र पीडाहरू बिर्सिएर। तर स्वर्गको संसारमा दिमागले यस पृथ्वीमा भएको भन्दा बढी कुनै ज्ञान प्राप्त गर्दैन। पृथ्वी यसको संघर्ष र विद्यालयको रणभूमि हो जहाँ यसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, र पृथ्वीमा आफ्नो प्रशिक्षण र शिक्षा पूरा गर्न मन फर्कनु पर्छ।
जनवरी अंकको सम्पादकीय पृथ्वीको बारेमा स्वर्गमा हुनेछ।